Otomatiki Sticker Bottle Inofusha Machine - Micvd.com
Otomatiki Sticker Bhodhoro Kufurutsa Machine
Mukubatana nedzimwe mhando dzemidziyo yekurongedza yemvura, michina yekubhabhadzira mabhodhoro anodikanwa kuti ubatsire kupedzisa kuita. NPACKyepamusoro-ye-iyo-ye-mutsara bhodhoro rekutsikisa machira rinogona kubatsira kuti uve nechokwadi chekuti nzvimbo yako iri pabasa repamusoro. Pasinei nechishandiso uye kudhinda zvakatemwa, unogona kubatsirwa kubva kumamishini akagadziriswa bhokisi rechinyorwa uye zvimwe zvinoshandiswa kubva NPACK.
Inovimbika Uye Inoshanda Bhodhoro Rekugadzira Zvigadzirwa
Kushandisa bhodhoro rekunyorera mabheji kubva NPACK inogona kupa chako chinodiwa kuti chinyatso kupedzisa kugadzirwa kwemvura chiitiko, nekugona kuisa marongedzero akagadziridzwa uye mamwe magwaro uye mifananidzo kumabhodhoro isati yatumirwa.
Mashini edu ekutsikisa anokwanisa kunyorera akajeka, pepa, kana maMalebula mavara kune mabhodhoro emhando dzakawanda nehukuru, kusangana zvese zveindasitiri zviyero zvekutakura. Panguva imwecheteyo, yega yega bhodhoro unogadziriswa kuti uite zvaunoda, uye iwe unogona kana kumanikidza kusanganisa ichi chishandiso pamwe netaipi rako rekugadzira tambo kana kuvashandisa seyakagadzikana midziyo.
Midziyo yedu yekudhindisa mabhodhoro yakavakirwa kugara kwemakore mazhinji zvichitevera kuisirwa, izvo zvichabatsira kuti uwane kwazvo kubva kune imwe neimwe chigadzirwa chawakatenga kubva kwedu kwakakura kusarudzwa kwemabhodhoro ekubhadhara machina uye zvimwe zvakawanda.
Shandisa iyo Bhodhoro Inodhinda Mafuta Zvemhando Dzese dzakasiyana dzeZvinodhaka Uye Zvimwe Zvigadzirwa
Unogona kushandisa mabhodhoro edu emabhokisi emhando dzakawanda dzezvigadzirwa zvekugadzira, uchishandisa marekodhi kune zvigadzirwa zvinoda zvese kubva kumabhodhoro madiki, akaonda, kusvika kumidziyo mikuru, yakafara. Isu tinotakurawo mhando dzebhodhoro remuchina rakagadzirirwa kushandiswa munzvimbo dzine njodzi.
Isu tinoshandisa chete zvakanakisa zvigadzirwa panguva yekugadzira, kugadzira aya mabhodhoro ekutsikisa mabheji kwakanakira zvivakwa zvinoda zvigadzirwa zverefu-refu kuburikidza nekushandisa zvakanyanya. Iwe unogona kushandisa michina yedu kweanoda chero mhando yechigadzirwa, uye musanganise iwo nekusarudza kwedu kweairi mafirita, macappers, uye madhiraivha ehurongwa hwakakwana hwemvura kurongedza.
Tsvaga Yakakodzera Label Machine Pamabhotoro Uye Kumbira Quote Nhasi
Tarisa kuongorora kwedu kusarudzwa kwemashini ekunyora emabhodhoro pazasi uye tsvaga yakakodzera chikamu chemidziyo yenzvimbo yako. Kana iwe uchida ruzivo rwakawanda pamusoro pemashini edu ekubhadhara machina pamwe chete nekamhepo yemahara, ingo taura nesu nhasi. Iwe unogona zvakare kuziva nezvezvimwe zvishandiso zvatinotakura mukuwedzera pakunyora manzwi kumabhodhoro kuti upedze mitsara yako yekugadzira.
Kuti tikubatsire kuwana zvakanyanya kubva kubhodhoro rako rekunyorera muchina wekutenga, isu zvakare tinopa masevhisi akadai sekumisikidza, kugadziridzwa, uye kutsetseka kwemutsara izvo zvinobvumidza kubatana pasimudziro nezvimwe zvese zvemidziyo yako.
Bhodhoro Inotenderwa Ekutsikisa Mashini
Shanghai NPACK Atomatiki Zvigadzirwa kugadzira kweyemukati chirairo muchina mune shanghai. Bottle Yakatemerwa Chirairo Chokudhizaina ndeyebhodhoro rinotenderera uye inotsanangudza dambudziko rebhuku remanyorero
Mutengi achachengetedza mutengo wemanyora uye kumhanya kwakanyanya. Izvo zvinoshandiswa muP Pharma, Chemical, Chikafu indasitiri nezvimwewo
otomatiki Npack Otomatiki Zvishandiso Co., LTD inyanzvi mune chero mhando dzekunyorera muchina (Sticker yekumisikidza muchina, Glue yekumisikidza muchina, Sleeving yekunyorera muchina). Bhodhoro rinotungamirwa sitcker yekumisikidza muchina yakagadzirirwa iyo yekunamira chitaridzi / Adheisve chitaridzi, kushandira iyo yakatenderera bhodhoro, Tin inogona, Jars. Sticker yekumonera-yakatenderedza bhodhoro rinotarisana nemashini ekuchina, otomatiki kutsvaga taper bhodhoro rekunyora muchina.
Bottle Oriental Labeling Machine inodzorwa ne servo mota (label chaiyo iri 1mm), Inokodzera chero mhando dzemhando yekutenderera.
Ese magetsi emuchina wekutsikisa unogadzirwa muTaiwan kana Japan
Matatu matatu akabata mashini anobvumira yakakwirira kunyora kunyatsorongeka kweyekutenderera bhodhoro
Pneumatic inoputira-yakakomberedza chiteshi kune zvinoenderana nehuwandu hwebhodhoro dhayeti
zita Bhodhoro Inotenderwa Ekutsikisa Mashini
Kutengesa Kushingaira 20-40pcs / min (Zvichienderana nehurefu urefu uye bhomba)
Kurema kwezvakaitwa 30-200mm
Kuwanda kwechinangwa 30-90mm
Kurema kweEti 15-140mm
Urefu hweTeti 25-300mm
Ramba Roller Inside Diameter 76mm
Ramba Ratidza kunze kwemasimbi 380mm
Kunyoresa kwekunyora ± 0.5mm
Magetsi 220V 50 / 60HZ 0.8KW
Kushandiswa kweGesi kweChina 5Kg / cm ... 2
Kukura kwekubata Machine 2000 (L) × 1000 (W) × 1250 (H) mm
Bata skrini uye PLC kutonga
Around 30 ndangariro dzekubika dzekuravira paramita zviri nyore kuti shanduko yebhodho yakakura.
Yakaderera kana yekushaika label inoona.
Yakasarudzika kumhanya kusarudzwa
Servo mota kutyaira kwakanyanya uye kumhanya zvakanyanya
Hapana bhodhoro risina kunyorwa.
Kugadzirisa inopisa foil coding muchina, uyo unogona kupurinda EXP MFG BATCH pane chinyorwa
Ampoule & Vial Sticker Kunyora Muchina
Ampoule / vial sticker yekunyorera nyowani muchina inogadzirwa naShanghai NPACK Equipment Automatic Co.ltd. iyo inonyanya kunyorerwa mushonga bhodhoro, Ampoule, Oral fluid, ropa chubhu, Peni, Vial
Otomatiki Oral Liquid Bottles Horizontal Labeling Machine, otomatiki inonamira chinyorwa muchina we ampoule / tube / peni.
Muchina uyu wakasvibiswa nerovo mota uye kugadzirisa iyo inopisa foil coding muchina uri pamusoro wemberi musoro.
1. 304 Stainless simbi kuvaka furemu
2.Kunyora kumhanya kunoenderana otomatiki neanomhanyisa kumhanyisa kuti uve nechokwadi chekunyorera mhando.
3. Otomatiki infeed turntable dhayamita 550mm
4. Hot foil coding muchina
5. Servo mota uye PLC uye Kubata Screen inovimbisa prefect chitaridzi chaizvo
zita Ampoule / Vial Labelling Machine
fambisa Servo Motor Mutyairi
Kutengesa Kushingaira 100-180PCS / Min
Bhodhi Diameter 10mm-30mm
Tora Kurera 15mm-150mm
Tora Urefu 10mm-90mm
Chinyorwa Chaicho 1mm
Max Label Roll dhayamita 300mm
Label Core Dhayamita 76mm
divi 1800mm 800mm * * 1600mm
simba 220V Chikamu Chete 750W
1. Ongorora otomatiki kureba kwemalebula
2. Yakagadzirirwa neyekuchenjera mudziyo weisina kukwana mavara, akapwanywa mavara
3. Hapana bhodhoro, pasina kunyora
4. Hapana mavara, pasina kunyora uye kunyevera otomatiki
5. Kwete Ribhoni, otomatika yambiro
6. Bhodhoro rimire patiraki, uye otomatiki akarara pasi pamusoro peereketa kuti inyore
Vertical Round Bhodhoro Rinodzora Machine
NPACK kugadzirwa kwemata Automatic tsvimbo yekutsikirira muchina ndeye bhotoro rinotenderera uye kuonesa dambudziko rechinyorwa label.
Yakatenderedza bhodhoro sitcker kunyoresa muchina yakagadzirirwa iyo inonamira nyora / Adheisve label, ichishandira iyo inotenderera bhodhoro, Tin inogona, maJars. Muchina uyu otomatiki unoputira chitauro cheti pane iyo yakakomberedza mudziyo.
Mutengi achachengetedza mutengo wemanyora uye kumhanya kwakanyanya. Izvo zvinoshandiswa muP Pharma, Chemical, Chikafu indasitiri nezvimwewo.
1 otomatiki kuputira yakatenderedza yekunyora muchina inodzorwa ne servo mota (chitaridzi chaiyo i1mm), Inokodzera chero mhando dzedenderedzwa mudziyo.
2 Mutengi haadi kuchinja chero zvikamu kana iwe ukachinja bhodhoro rakasiyana, mutengi zviri nyore kugadzirisa uye kushanda muchina wekunyora. muchina unogona kushanda maawa makumi maviri nemana.
3 Ese mativi emagetsi emuchina wekunyora anoitwa muTaiwan kana Japan
mhando NP-RL Round Bhodhoro Bhokisi Remabhaini
havukavu 40-150 PCS / Min
Kunyora Chaicho ± 1.0mm
Saizi yechiratidzo (L) 20-280mm (H) 30-140mm
Kukura kwezvinhu Φ40-Φ100mm (H) 40-300mm
Tenderera mukati Φ76mm
Tambanudza kunze kwepakati Φ350mm
Saizi yemuchina (L) 1800 * (W) 850 * (H) 1450 (mm)
Magetsi AC220V 50Hz / 60Hz 1500W
1. Bata skrini uye PLC kutonga
2. Inotenderedza makumi matatu mememori mepikicha dzekuravira paramita zviri nyore pakuchinja kwebhodhi.
3. Yakadzika kana yekushaika label inoona.
4. Synchronized kumhanya kusarudzwa
5. Servo mota kutyaira kwakanyanya uye kumhanya zvakanyanya
6. Hapana bhodhoro risina kunyorwa.
7. Kugadzirisa inopisa foil coding muchina, uyo unogona kupurinda EXP MFG BATCH pane chinyorwa
Bhegi Sticker Inofukidza Muchina
Bhegi rekuzvinyorera labelling muchina rakagadzirwa na NPACK. inonyora bhegi, chikwama, katoni, kadhi neti tsvimbo
Chitaura ndicho chitauro / kuzvishongedza chitaure. Pamusoro pekutsikisa muchina. Kuparadzanisa bhegi otomatiki.
Pouch Kureketa Machine iri yakakodzera kune doypack popuch, bhegi, sachet, kadhi yekutsikisa makadhi. Muchina uyu unokwanisa kupaza chikwama chisina chinhu otomatiki chimwe nechimwe.
1 Musoro welebeche uri pamusoro peerekodhi
2 Magetsi zvikamu zvinogadzirwa muJapan kana Europe
3 Pasina Bhegi, pasina kunyora
4 Inokodzera chitauro / chirahwe chekunamatira
5 Chitafura pabhokisi, pouch, Kadhi, bhegi Inogona uye mhando dzechinhu chemukati mudziyo
zita Bhegi Sticker Inofukidza Muchina
Kutengesa Kushingaira 20-200pcs / min
(Zvichienderana nehurefu hweleyita uye bhodhoro gobvu)
Kuwanda kwechinangwa 20-200mm
Kurema kweEti 15-110mm
Ramba Ratidza kunze kwemasimbi 350mm
Kunyoresa kwekunyora ± 0.8mm
Magetsi 220V 50 / 60HZ 0.75KW
Kushandiswa kweGesi kweChina 5Kg / cm ^ 2 (kana kuwedzera coding machine)
Kukura kwekubata Machine 1600 (L) × 550 (W) × 1600 (H) mm
1 PLC uye Kubata control system
2 Main body yemushini ndeye 304SS
3 Isu tinotora iyo servo mota uye sensor (Yakagadzirwa muJapan) kuitira kuti tigone kuvimbisa yakanyorwa zvakanaka
4 Kugadziridza coding muchina kuprinda zuva ruzivo pane zvinyorwa
5 Hapana chinhu, Hapana Chinyorwa
6 Chishandiso chekudyisa bhegi chinogona kutsemura bhegi zvoga
Wepamusoro Side Sticker Kubata Machine
Pamusoro peti yekunamatira nyowani muchina inogadzirwa na NPACK. Ndezvipi zvingaremedza bhokisi repamusoro, makini Matani, chikwama uye marudzi ese epasi ndege.
Pamusoro Side Sticker Labelling Machine yakakodzera kune ese marudzi ezvinhu zvine mapuraneti, zvakadai semabhokisi, mabhodhoro, makani, etc. Zvakashandiswa Zvakanyanya mu cosmetic, zvinwiwa, makemikari, zvekurapa, indasitiri yezvikafu, stationery CD, akasiyana mafuta, nezvimwewo kudhindisa muchina kuronga pasi.
3 Pasina mudziyo, pasina kunyora
5 Chitafura pabhokisi, pouch, Can uye mhando dzechinhu chemukati mudziyo
zita Wepamusoro Side Sticker Kubata Machine
Otomatiki Mativi maviri Sticker Kubata Machine
Otomatiki Mativi maviri Sticker Kubata Chinyorwa Machine yakagadzirirwa na NPACK. Iyo yakaenzana mativi / firati / denderedzwa bhodhoro rakapetwa kaviri kudhara rechina (pamberi uye kumashure kwechekure).
Muchina uyu unogona kutsemura bhodhoro, imwe mota inodhirita dhiri repurasitiki nedhiraivha, bhodhoro richava mutserendende uchifambisa pane rinosimudzira. Servo mota, PLC uye Kubata screen ichave yakakwira label.
Otomatiki maviri Side Sticker Labelling Machine yakagadzirirwa pachigadziko chemativi maviri echitenderera bhodhoro, flat bhodhoro, denderedzwa bhodhoro. Kuti usangane nevamwe vevatengi kuti uite zvinodiwa neleel maviri mativi uye anotenderera mabhodhoro. iwo mushonga, zvemazuva ese makemikari, chikafu chemagariro, Magetsi uye etc. Muchina uyu uri kudzora servo mota nePC uye kubata screen, iri akawanda anonamira / unonamatira
1 Servo mota, PLC uye kubata screen
2 Kuparadzanisa bhodhoro rimwe nerimwe nekudzvanya bhodhoro pane rinosimudzira
3 Namatira zvinyorwa zviviri zvemata (pamberi uye kumashure) panguva imwe chete
4 Kuona kusefa uye muchina we capping
zita Otomatiki Mativi maviri Sticker Kubata Machine
Kutengesa Kushingaira 60-350pcs / min (Zvichienderana nehurefu urefu uye bhomba)
Kurema kwezvakaitwa 30-350mm
Kuwanda kwechinangwa 20-120mm
Ramba Ratidza kunze kwemasimbi 420mm
Kunyoresa kwekunyora ± 1mm
Magetsi 220V 50 / 60HZ 3.5KW Kamwe-chikamu
Kukura kwekubata Machine 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
1. PLC uye kubata screen, servo mota
6. Servo mota control, yakagadzikana kunyorwa.
7 Label sensor uye magetsi zvikamu zvinogadzirwa muJapan
8 Inokodzera iyo yakatenderera / yakati sandara / square bhodhoro
Otomatiki Double Side Chikamu Bhodhoro Kufurutsa Machine
NPACK gadzira iyo yekuzvishongedza yekuzvishongedza yekuisa manotsi muchina, Double padanho rekutsikisa muchina, Kupisa / kuchitonhora glue kudhinda chiraini, Chokuita macheke ekutsikisa manzwi.
Kaviri mativi mativi matanda bhokisi yekudzvinyirira machira unogona kunama maviri maviri zvimanyoro pabepa uye contorl nePLC uye kubata skrini
NP-TS Mativi maviri mashina ekutsikisa manhamba akagadzirirwa pachigadziko chemativi maviri ekutsikisa manhamba, kusangana nevamwe vevatengi kuti asvitse zvinodikanwa zvezita mbiri mativi uye mabhota anotenderera. inonyanya kushanda kwesikwere, mabhodhoro eparutivi, midziyo yekutenderera yemishonga, makemikari ezuva nezuva, zvekudya zvetsika, Magetsi.
Kaviri sidel yekutsvaira muchina ndeyeMuchina-Basa rekunyora machina, sutu yeFlat, Oval, Square, Round bhodhoro. muchina uyu uri kudzora neyavo servo mota drive kuitira kuvimbisa yakakwana rebula chaiyo.
1 otomatiki mbiri Side oval bhodhoro kunyorera muchina uye kutenderera bhodhoro
2 Unganidza iyo yekuzadza uye Caps mutsetse nekumhanya kwakanyanya
3 Servo mota uye PLC inogona kuvimbisa kuti inyowani
4 Mutengi zvirinyore kushandura muchina kana uchichinja saizi yemabhodhoro, hapana chikonzero chekuchinja chero zvikamu
zita Yekumhanyisa kaviri Sides Kurutse Chimiro cheMabhureki
1. PLC uye Bata Screen CONTROL, Ongorora otomatiki kureba kwemalebula
4. otomatika yambiro Pasina mavara
7. Yakakwana Label chaiyo
8. Inokodzera chero mhando bhodhoro, Makani, Mapani
9 mutengi anokwanisa kugadzirisa kona yepa studio maererano nenzvimbo yechitarisiko